Global Voices teny Malagasy » Pologne: Ady amin’ny homamiadana amin’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Marsa 2010 10:18 GMT 1	 · Mpanoratra Magda Pilat Nandika miora
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Polonina, Fahasalamàna, Hafanàm-po nomerika, Teknolojia
Tranga tsy dia fahita loatra ity homamiadan'i Paula ity ary taoriana kely ny fandidiana azy dia naheno izy fa tsy dia misy fanafody mahazatra afaka manasitrana azy. ‘Sompatra ity fivontosana ity ary tsy vitanay ny mitsabo azy,’ hoy ireo dokotera Poloney niraviravy tànana. Soa ihany fa nahalala toeram-pitsaboana any Boston  ny rahavavin'i Paula, izay efa nitsabo ary nahasitrana soa aman-tsara ny olona voan'ity homamiadana ity. Niresaka tamin'ilay hopitaly Amerikanina i Paula ka vetivety ihany dia nahazo fanasana hanao fitiliana. Faly ireo dokotera hanao ny fitsaboana, ny olana fotsiny anefa dia ny saram-pitsaboana, izay mahatratra $250 000. Fa tsy nampihemotra an'i Paula izany. Nampiasa ny blaoginy amin'izay izy hitadiavany fanampiana ara-bola. Ankasitrahana ny fahatsoram-pon'ireo mpamaky ny blaoginy sy ireo izay nanisy rohy mankany amin'ny blaoginy fa voahangona ihany ny vola nilaina ary dia lasa nanao ny fandidiana tany Etazonia i Paula tamin'ny volana Aogositra 2009.
Ankehitriny, mbola maro ka mila fitsaboana ny fivontosana ao anatin'ny havokavony, nefa mijery ny ho aviny amim-panantenana izy. Ao amina resadresaka ho amin'ny famoahana teny Poloney an'ny Newsweek  no nanontanian'ilay mpanao gazety azy raha mbola matahotra ihany izy. Hoy izy:
Ny blaogin'i Lenka sy ny an'i Paula dia samy mandray anjara amin'ny fifaninanana Blaogy polonein'ny taona 2009  ary mankasitraka ireo mpamaky satria noho ny latsabaton'izy ireo dia samy tafakatra tamin'ny famaranana ry zareo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/03/06/5205/
 toeram-pitsaboana any Boston: http://www.dana-farber.org/
 resadresaka ho amin'ny famoahana teny Poloney an'ny Newsweek: http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/ja_kobieta/paulina-pruska--zaplanowalam--ze-bede-zyla,46219,1
 Blaogy polonein'ny taona 2009: http://www.blogroku.pl/